\_'विश्वमै लोप हुन थालेको सिद्धान्त बोकेका वाम गठबन्धनमा मिसिन जाँदैनौं\_'
फागुन १५, २०७४| प्रकाशित १४:३३
नयाँ शक्ति पार्टीले आफ्नो चौथो संघीय परिषद्‌को विस्तारित बैठक लुम्बिनीमा सम्पन्न गरेको छ। लुम्बिनी-संकल्प २०७४ जारी गर्दै नयाँ शक्ति पार्टीले नेपालमा नयाँ राजनीतिक विकल्प दिने प्रण लिएको छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय दल पनि बन्न नसकेको नयाँ शक्ति आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ला? चुनावअघि वाम गठबन्धनमा जोडिएर लगत्तै अलग्गिएको नयाँ शक्तिले वाम एकतालाई कसरी लिएको छ? यिनै सेरोफेरोमा नयाँ शक्तिका संयोजक डा बाबुराम भट्टराई लुम्बिनी पुगेका बेला नेपाल लाइभका दीपक घिमिरेले गरेको अन्तर्वार्ता :
नयाँ शक्तिले स्थापना भएदेखि नै राजनीतिक रुपमा आफूलाई जनतासँग जोड्नेगरी कुनै 'मुभमेन्ट' ल्याउन सकेन भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? अब आम जनतामा विश्वास जगाउनेगरी कस्ता कार्यक्रम ल्याउनुहुन्छ?
अब हामीले 'मिसन ५ वर्ष, भिजन ५ स' भनेर पारित र प्रण गरेका छौं। '५ स'लाई आधार मानेर ५ वर्षमा विभिन्न कार्यहरु गर्नेछौं। हामी यो प्रण गर्न २५ सय वर्षअघि बुद्धले चेतना प्राप्त गरेको स्थानमा पुगेका थियौं। अब हामीले अँध्यारोबाट उज्यालो तर्फको बाटोमा यात्रा तय गरेका छौं। हाम्रा भित्री कमजोरी हटाउन आवश्यक छ। ५ वर्षमा परिवर्तनकारी रुपान्तरणको पहल गर्छौं।